Nandrolone Decanoate (DECA) Soo-saareyaasha budada & Alaab-qeybiyeyaasha - Warshadda
Daawada Raw Nandrolone Decanoate (DECA), oo sidoo kale loo yaqaan 19-nortestosterone, waa aerosos iyo stabtoof anabolic (AAS) kaas oo loo isticmaalo habka esterada sida nandrolone decanoate (magaca brandka Deca-Durabolin) iyo nandrolonephenylpropionate (magaca calaamadda Durabolin) .
Qalabka Raw Nandrolone Decanoate (DECA) budada (360-70-3) video
Roog Nandrolone Decanoate (DECA) budada (360-70-3) Sharaxaad
Raw Nandrolone Daawo Duufaan ah waa shaki la'aan mar labaad-ugu fiican ee loo yaqaan stero-oogista ka dib baaritaanka tijaabada. Qalabka anabolic waxaa lagu qiimeeyaa mid ka mid ah daawooyinka ugu fiican si loo ilaaliyo xajinta muruqa cufan iyo kicinta cuntada. Cudurka steroid ee anaboleed oo ka helay aqbaar aad u ballaaran oo ka mid ah jismi-yaqaanada iyo cayaaraha.
Asal ahaan waxaa loo sameeyey si loogu daaweeyo shakhsiyooyin lagu ogaado cudurrada murqaha, Dufanka Raw Nandrolone Decanoate (DECA) wuxuu awood u leeyahay inuu horumariyo cufka lafaha iyo kobaca murqaha. Isticmaalida steroidkan mudo ah lix illaa siddeed toddobaad ayaa lala xiriiriyaa koror xoog leh oo ku yimaadda wax soo saarka unugyada dhiigga cas cas iyo daaweynta dhibaatooyinka wadajirka ah ee ay la kulmeen ciyaaryahannada qaar inta lagu jiro jirdhiska. Isticmaalkan steroid waxaa sida caadiga ah loo isticmaalaa inta lagu jiro faa'iidada ballaaran ama marxaladaha dheef-shiidka waana mid kamid ah steroids aad u yar oo loo isticmaali karo labadaba xilli-ka-hor iyo kahor tartan xirfadeed.
Root Nandrolone Decanoate (DECA) budada Smamnuucista
Product Name Root Nandrolone Decanoate (DECA) budada
Magaca Kiimikada Nandrolone decylate;19-Nortestosterone 17β-decanoate; 4-ESTREN-17BETA-OL-3-ONE 17-DECANOATE;4-ESTREN-17-BETA-OL-3-ONE DECANOATE;19-NORTESTOSTERONE 17-DECANOATE;19-NORTESTOSTERONE DECANOATE;17BETA-HYDROXY-19-NOR-4-ANDROSTEN-3-ONE 17-DECANOATE
Molecular Wsideed 428.65
dhibic kulayl 483.46 ° C (qiyaasta adag)
Color Cadaan ah si aad u aragto budada crystalline jaalaha ah
Application Asal ahaan asaasay in lagu daaweeyo shakhsiyaadka laga helayo cudurrada muruqyada, Nandrolone Decanoate wuxuu leeyahay awood uu ku hormariyo cufnaanta lafaha iyo kobcinta murqaha wuxuuna si weyn u wanaajin karaa unugyada borotiinka, waxtarka nitrogen, waxqabadka, iyo dulqaad.
Waa maxay budada Raw Nandrolone Decanoate (DECA) budada (360-70-3)?
Saldhiga Nandrolone waxaa badanaa laga soo saaraa hormoonada hormoonka labka ah ee ragga. Waxay ka caawin kartaa dib-u-dhiska unugyada jirka, kordhinta jirka iyo lafaha, dhiirigelinta sameynta unugyada dhiigga cas. Waxay kaloo sameyn kartaa kobaca murqaha, kicinta rabitaanka cuntada iyo kordhinta wax soo saarka unugyada dhiigga iyo lafaha lafaha. Daraasadaha cilmiga caafimaadku waxay muujiyeen in ay waxtar u leeyihiin daawaynta dhiig-yare, osteoporosis iyo qaababka neoplasia oo ay ka mid yihiin kansarka naasaha, iyo sidoo kale waxay u dhaqmaan sida uur-qaadidda progestin-ku salaysan. Nandrolone waxaa inta badan lagu gadaa ganacsi ahaan sida aaladda deca-Durabolin iyo sida caadiga ah sida aaladda phenylpropionate (Durabolin).
Sida Root Nandrolone Decanoate (DECA) budada (360-70-3) shuqullada
Nandrolone budada ceeriin ee nandrolone waa steroid anabolic. Waxay ka shaqeyneysaa kordhinta koritaanka unugyada qaarkood ee jidhka waxana lagu muujiyay inay kor u qaadaan awoodda oksijiin-qaadista awoodda dhiigga iyagoo sii kordhinaya hemoglobin iyo cabbirka unugyada dhiigga cas.
Budada rooga nandrolone Decanoate (DECA) budada (360-70-3) Isticmaalida
Isticmaalka Caafimaadka Nandrolone
Nandrolone ayaa sidoo kale loo isticmaalay in lagu daweeyo lafaha osteoporosis ee haweenka, sida laga soo xigtay Tababaraha Dhakhtarka ee rugta takhasuska caafimaadka. Nandrolone waxay hagaajineysaa isdabajooga jirka ee jirka iyo dib u soo celinta dheellitirka jidhka ee kalsiyamku iyadoo la xoojinayo macdanta lafaha. Nandrolone ayaa sidoo kale loo isticmaalay in lagu daaweeyo kansarka naasaha iyo in la yareeyo astaamaha AIDS-ka, sida laga soo xigtay website-ka Wiley InterScience. Tani waxay tan ku sameeyneysaa in ay ka caawiso ka hortagga in lakulanka dufanka jidhka iyo awood jireed oo inta badan la dhaco bukaannada AIDS-ka.
Budada rooga nandrolone Decanoate (DECA) budada (360-70-3) Faa'iidooyinka
Nandrolone waxay wax ku ool u tahay kordhinta murqaha iyo cufnaanta. Tani waxay ku sameeyneysaa iyada oo gacan ka geysaneysa in jirka uu isticmaalo borotiinka waxsoosaarku si fiican u isticmaalo. Saameynaha badanaa waa mid ku meel gaadh ah, cuntaduna aad u sarayso ee borotiinka ayaa loo baahan yahay si loo dhiso habka murqaha oo ku filan. Nandrolone ayaa yarayn karta waqtiyada ka soo kabashada dhaawaca iyo kordhinta heerarka istaandarka iyadoo yareyneysa daalka ka dib jimicsi. Tani waxay sameeyneysaa kor u qaadista heerka muruqa glycogen ka dib markii uu jiro jimicsi adag. Taas macnaheedu wuxuu yahay in ciyaartoyda ay ku tababaran karaan waqti dheer iyada oo aan daalin. Isticmaalka Nandrolone ma aha oo kaliya waxyaabaha caanka ah ee ka shaqeeya jirka, laakiin sidoo kale wuxuu si fiican u shaqeeyaa daaweynta xaalado caafimaad oo kala duwan. Saameynta wanaagsan ee daawada waxaa ka mid ah koritaanka murqaha, kicinta rabitaanka cuntada iyo kordhinta unugyada dhiigga cas iyo kordhinta lafaha. Daraasadaha cilmiga caafimaadku waxay muujiyeen in ay waxtar u leeyihiin daawaynta dhiig-yare, osteoporosis iyo qaababka neoplasia oo ay ka mid yihiin kansarka naasaha, iyo sidoo kale waxay u dhaqmaan sida uur-qaadidda progestin-ku salaysan.
Soo iibso Nandrolone Decanoate (DECA) budada (360-70-3) ka Buyaas.com
dib u eegis 1 waayo, Budada rooga nandrolone Decanoate (DECA) budada (360-70-3)
Sheyga NANDROLONE DECANOATE (DECA) POWDER waa mid aad u faa'iido leh.